कुर्सीको कुरो ! | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
घर समाचार वाटिका कुर्सीको कुरो !
विद्यार्थी जीवनका आफ्नै रमाइलाहरू हुन्छन् । यसबारेमा सबैका सबथरी अनुभव हुन्छन् । हाम्रो देशको कुनै विद्यालयमा छात्रछात्राको परीक्ष्Fा चल्दै थियो । त्यसो त अचेलका विद्यार्थी, गुरुजी सबैले परीक्ष्Fा शब्दको मानपदवी बढाएर ‘एक्जाम’ भन्न थालेका छन् । पढाइ भो नेट, बाँकी सब चेट् १
परीक्ष्Fामा यौटा अनौठो प्रश्न सोधिएको रहेछ । प्रश्न यस्तो खालको थियो– तलका प्रश्नहरूको सङ्क्षेपमा उत्तर देऊ। ठूलो भए‘नि क्यै नाप्दैन ।
प्रश्नहरू– कुर्सी केलाई भनिन्छ ? देखेका छौं ?
उत्तरहरू– कुर्सी यौटा आसन हो । पहिले काठका कुर्सी हुन्थे । पछि फलामले त्यो बजार लियो । फलामे कुर्सीलाई प्लास्टिकको कुर्सीले अचेल विस्थापित गरिसकेको छ । त्यसो त कुर्सी बस्ने यौटा ठाँडो मात्र हो ।
प्रश्नहरू– यीबाहेक पनि कुर्सीका अन्य जात हुन्छन् कि ?
उत्तरहरू– सुत्नै मिल्ने कुर्सीलाई अचेल सोफा भन्छन् । पद अनुसार कुर्सीहरू पनि अनेकथरीका हुन्छन् । पद, पैसा, अधिकार, शक्ति अनुसार यो जिनिस पनि चिल्लो, मोटो, गद्दा भएको, अनेकथरी चम्किला पदार्थ जडिएका भव्य र आकर्षक हुन्छन् । राजाहरू राज गर्ने पहिलेका सिंहासन नै समाजवादी भनिएर कुर्सीका रूपमा छ्याप्छ्याप्ती भएका छन् ।
प्रश्नहरू– कुर्सीको उपयोगिता कतिको छ ? राम्ररी प्रस्ट्याऊ ।
उत्तरहरू– अचेल कुर्सीको महŒव निकै बढेको छ । अचेल कुर्सीका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, निर्देशक, न्यायाधीश, हीरो, बिजनेशमैन सबै–सबै लालायित रहन्छन् । पागल बनेका हुन्छन् ।
कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । जति ठूलो कुर्सी हुन्छ, त्यसको मोल उत्तिकै बढी हुन्छ, किनभने त्यसको लँुछाचुँडी गर्ने थुप्रै हुन्छन् । ‘नेताजी’ भनिने एक प्रकारको प्राणी पनि हुन्छ । त्यसले दिनरात कुर्सीको पूजाआजा, आरती, भजन–कीर्तन गर्छ । आरतीमा भन्छ– ‘त्वमेव माता च पिता त्वमेव…१’
यस तथ्यलाई संसारको इतिहासले पनि प्रमाणित गरेको छ । गद्दी प्राप्त गर्नका लागि अनेकपटक हत्या, युद्ध, आन्दोलन, धोका, अत्याचार भएका प्रमाण टन्नै पाइन्छन् । यो कुर्सी पनि त प्राचीन गद्दीकै शाखा सन्तान त हो नि १
प्रश्न– कुर्सी किन झन्–झन् प्यारोस झन्–झन् महँगो हुँदै गएको छ ? भन्छन्ः भगवान्भन्दा पनि कुर्सी ठूलो, शक्तिशाली, आकर्षक, आनन्ददायक भएको छ रे ?१ के कुर्सीको महिमा यति धेरै बढेकै हो त ? नढाँटी भन त १ आज विश्वमा कुर्सीकै एकछत्र साम्राज्य छ त ?
उत्तर– सारा विश्वमा आज कुर्सीकै लडाइँ त चलेको छ नि १ अमेरिका जस्तो नम्बर वन देशमा त घमासान चल्यो, कुर्सीकै लागि । यो कुर्सीले गर्नुगरेको छ । राजनीतिको क्षेत्रमा मात्रै हैन, जुनसुकै क्ष्Fेत्रमा हेर्नुस्– कुर्सीकै खेल चलिरहेको हुन्छ । कुर्सी नचाहने उल्लू आज को छ र ?१ प्राण जाय पर कुर्सी नजाय १
पद, पैसा, पावर, प्रतिष्ठा, पोपुलैरिटी सबै कुर्सीकै देन हो भन्ने कुरा सबैले अब राम्ररी बुझिसके । निर्जीव कुर्सीले सजीव सुपरमैनलाई कति ठूलो सबक सिकायो त । धन्य कुर्सी तेरो महिमा अपरम्पार छ । जहाँ हेर्नुस्, कुर्सीकै लागि टाउको फोडाफोड छ ।
देशभक्त–राष्ट्रभक्त यहाँ कोही पनि छैन, सबै कुर्सीभक्त मात्र हुन् । अहिले ओली र प्रचण्डको साँडे जुधाइले पनि कुर्सी महिमाको राम्रो प्रमाण पेश गरेकै छ ।
एकजना नेताजीले अचम्मै गरेका थिए रे । उनी माताको गर्भबाट बाहिर आउनै मानेनन् रे । नौ–दश महीनामा जन्मनुपर्नेवाला त बा¥ह महीना भइसक्यो जन्मदैन बा १ अब के गर्ने ? ठूलै समस्या प¥यो ।
गर्भस्थ शिशुले भनेछ, म जन्मनासाथ कुर्सीमा बस्न पाउने व्यवस्था मिलाए भने मात्र म बाहिर आउँछु । नत्रभने म गर्भगृहमैं बसिरहन्छु ।
मारेन अब १ बाध्य भएर त्यस्तै व्यवस्था मिलाइयो । शिशु त जन्मनासाथ कुर्सीमा स्थापित । त्यो शिशुले पछिपछि भन्दो रै‘छ– कुर्सी पाउनु मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो !
अघिल्लो लेखमाद्रोण पर्व–२२
अर्को लेखमासिमरामा २५ शøयाको अस्पताल बनाउन माग